Ajụjụ | Sichuan Ideasys nkenke Machinery Co., Ltd.
Etu esi ekwe nkwa inyefe oge ndị ahịa chọrọ?
Iji hụ na nnyefe oge, a na-ahazi usoro ndị a:
1. Nhazi usoro
Mee ngwa ngwa na ọrụ dị iche iche nke ndị na-achịkwa njikwa na ọkwa niile. Mee nyocha na nyocha na-agbaso, jidesie ụzọ nke mmepụta ike ike, chọpụta oge kpatara ya ma chepụta usoro mmezi maka ndị emechabeghị atụmatụ mmepụta ahụ. Mee ka atụmatụ atụmatụ dị ike ma guzobe nzukọ imepụta oge. Mejuputa ngụkọta mmepụta okirikiri, na-elele mmejuputa oge usoro usoro ọ bụla megide atụmatụ ahụ, na-edozi oge ma na-achịkwa ike iji hụ na mmezu nke oge mkpokọta ezubere.
2. Nka na ụzụ ihe
Dabere na njikwa nnyefe oge, rụpụta atụmatụ ọrụ kwa izu. Lelee mmejuputa atumatu a kwa ubochi ma dozie ya n’oge. A ga-emezi mmezi na mmezi nke akụrụngwa na ojiji iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke akụrụngwa ahụ, iji hụ ma melite ọnụego ojiji nke akụrụngwa, iji zere ọdịda ma ọ bụ ụkọ akụrụngwa na-emetụta ọganihu nke ọrụ ahụ . Mee ka njikwa ọrụaka sie ike, nyochaa eserese ahụ tupu usoro ọ bụla, wee mepụta ngosipụta teknụzụ zuru ezu. Na usoro mmepụta, a ga-enyocha ma nyochaa ogo nke usoro ọ bụla. Ọ bụrụ na achọta nsogbu ọ bụla dị mma, a ga-edozi ya n'oge iji zere ịbido usoro ọzọ. Mee ka njikwa njikwa dị ike, mezuo njikwa mma dị ka mmesi obi ike dị mma, hụ na ogo nke usoro ọ bụla tozuru oke, wee kwụsị igbu oge nke owuwu nke nrụghachi na mmechi nke ngwaahịa ngwaahịa mere.
5. Usoro njikwa ihe ọmụma
Na usoro nke mmepụta na ntinye, nakọta data dị mkpa nke ọganihu n'ezie, dozie ọnụ ọgụgụ, jiri ya tụnyere ọganihu a na-eme atụmatụ, ma nye ndị ahịa akụkọ na-atụle mgbe niile. N'okpuru njikwa ya, a ga-akwadebe atụmatụ ọrụ izu ahụ, a ga-eme ndekọ ndekọ ọganihu, a ga-ejupụta tebụl na-aga n'ihu, a ga-ahazi mmekọrịta n'etiti akụkụ niile, a ga-ewere usoro ahụ n'oge, gbanwee, n'ụzọ ziri ezi ma sie ike, a ga-ewepụ ụdị nkwenye niile ọ bụla, a ga-eme ka njikọ niile na-adịghị ike sikwuo ike, nguzozi na-agbanwe agbanwe ga-emezu, ebumnuche nnyefe ahụ ga-ekwe nkwa.
Kedu otu esi achọpụta njikwa njikwa ngwaahịa?
1. Usoro njikwa "atọ"
Onye ọrụ ahụ anaghị arụpụta ngwaahịa nkwarụ; anaghị anabata ngwaahịa nwere nkwarụ; anaghị ekwe ka ngwaahịa ndị nwere nkwarụ banye na usoro ọzọ. Ndị ọrụ niile ga-edozi echiche ọma dị mma "usoro ọzọ bụ onye ahịa". Qualitydị mma malitere site na anyị onwe anyị, na-amalite site ugbu a, wee mezue ngwaahịa ahụ n'otu oge.
2. Usoro nyocha "Atọ atọ"
"Nnyocha mbụ" na-ezo aka nyocha dị mma nke ngwaahịa ndị onye nrụpụta nyefere ka emechara usoro gara aga tupu arụ ọrụ na-esote, gụnyere nyocha nke akụrụngwa na ihe enyemaka tupu hazie; "nyocha onwe onye" na-ezo aka nyocha nyocha nke ngwaahịa ndị onye nrụpụta rụchara mgbe emechara ọrụ ahụ, na onye nrụpụta na-achịkwa ogo ahụ; "Nnyocha pụrụ iche" na-ezo aka na nyocha nke onye isi ngalaba na onye ndu otu nyocha nke ndị ọrụ nyocha na ndị isi ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-eme nyocha nke ọma na ngwaahịa emechara na usoro nhazi, ọkachasị site na nyocha aghara. Ogo bụ ntọala maka ụlọ ọrụ iji biri, ọ bụkwa ntọala nke mmepe ya. Naanị na asọmpi mkpochapu, ụlọ ọrụ ahụ ga-emeri nnukwu mmepe nke ngwaahịa.
Esi emeso mkpesa ndị ahịa?
Lee mgbakwunye 8D faịlụ
Mgbe izipu ajụjụ ahụ, ogologo oge ole ka a ga-enye nkwupụta ahụ?
Anyị ga-aguputa gị n’ime ụbọchị ọrụ atọ.
Dzọ nnyefe? Esi nyefee Ebee ka njem si?
Anyị nwere uru na nnyefe. Ọ na-ewe ụbọchị 12 maka ụgbọ okporo ígwè si Chengdu ruo Europe. Anyị na-ebupụkwa njem ọ bụla dịka ihe ndị ahịa chọrọ.